किरानाबाटै धनगढीमा घर, छोराछोरीको पढाइ र आफूलाई ‘स्कूटर’
-जीवन बिष्ट धनगढी । ‘नेपालीको आत्तिने बानी, छिटो प्रगति भएन, पैसा भएन छिटै उपलब्धि भएन भन्ने हुन्छ । तर मैले कहिले यस्तो सोचिँन, संघर्ष गर्दै गए, अहिले सन्तुष्ट छु।’ उनले भनिन् । उनी अर्थात् ‘धर्मा सिंह’ उमेरले ४० वर्ष पुगेकी धनगढी उप–महानगरपालिका ३ विशालनगरकी सिंहको परिचय त्यति मात्रै हैन । उनी उद्यमी महिलाका रूपले परिचित छिन्...
कसरी जित्यो एक बैंकरको परिवारले कोरोनासँगको युद्ध ?
बैंंकर अनलराज भट्टराईको परिवारमा एकैचोटि ८ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । यो गएको साउन २६ गतेको कुरा हो । आज भदौ १३ गते, शनिबार । उनीसहित उनको परिवारका ७ जना संक्रमित आज कोरोनामुक्त भइसकेका छन् । यतिखेर उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न यसो गरिएको हो भनिएको छ । तर कसरी कम गर्न सकिन्छ त जोखिम ? कसरी जित्न सकिन्छ...
लकडाउन फलिफाप भयो, अनि उनी चित्रकार बने
-जीवन विष्ट धनगढी । देशमा ‘लकडाउन’ भएपछि स्कूल कलेज सबै बन्द भए । सबै फुर्सदमा थिए’ उनले भने, ‘मैले त्यही समयको सदुपयोग गरेको हुँ।’ उनी अर्थात् गणेश कठायत । अब त उनले चित्रकारको पहिचान बनाइसकेका छन् । कोरोना संक्रमणको महामारी बढ्दै भएपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । त्यो लकडाउनले धेरैको रोजीरोटी खोस्यो तर, टिकापुरका गणेश...
एक डाक्टरको लव नोट्स
सुजाता पन्त पेशाले मेडिकल एमबीबीएस डाक्टर हुन् । उनी हाल हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत छिन् । यीबाहेक साहित्य सिर्जनामा रुचि राख्ने र निरन्तर कलम चलाउने उनी आफूलाई थोरै लेखक अनि धेरै पाठक भन्न रुचाउँछिन् । उनी आफूलाई सबैभन्दा पहिले यो देशको, यो समाजको एक सर्वसाधारण आमजनता ठान्छिन् । एक मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेर गाउँका पाखा पखेरामा...
साझा बसकी सहचालक उषा, सपना छ चालक बन्ने
उषा सापकोटा साझा बसकी सहचालक हुन् । विगत एक वर्षदेखि उनी यो भूमिकामा छिन् । ‘कामलाई इज्जत गर्नुपर्छ अनि पो कामले पनि इज्जत गर्छ नि’ भन्ने उषा हरेक कामलाई फरक तरिकाले गर्नुपर्छ भन्छिन् । उनी कलात्मक काम गर्न पनि रुचि राख्छिन् । फुर्सदको समयमा उनी कलाकर्ममा आफूलाई व्यस्त राख्छिन् । कागजबाट सजावटका सामान बनाउने, कविता कथा लेख्ने उनको...
टियू टप हुँदै नेप्सेको उपल्लो तहमा पुगेकी प्रविन
नाममा कसैको निजी अधिकार हुन्न भन्ने प्रविन पन्दाक लिम्बु नायिका हुन् । प्रखर अधिवक्ता हुन् । उनी २०६४ सालदेखि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सेवारत छिन् । हाल उनी नेप्सेमा कामु प्रबन्धक र कम्पनी सचिवको भूमिकामा छिन् । तपाईंको परिचय दिनुपर्दा..., यति भनिसकेपछि उनी मुस्कुराउँदै भन्छिन् , ‘तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?’ शालीन किसिमले जवाफ...
जापानमा नेपाली उत्पादन बेचेर लाखौं कमाउने तनूजा
झापाको बुधबारेमा जन्मेर काठमाडौं हुँदै जापानमा कर्मथलो बनाउँदै आएकी तनुजा शर्मा व्यवसायमा जीवन खोजिरहेकी छिन् । नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा फैलाउनु र त्यहाँ भएको मागको परिपूर्ति गराउनु उनको ध्याउन्न हो यो बेला । कसैलाई सहयोग गर्नु पनि मानवको कर्तव्य हो भनेर सम्झने उनी जापान गएको ४ वर्ष भयो । सन् २०१६ मा उनी जापान गएकी हुन् । सन् २०१७...
–नरेन्द्रकुमार नगरकोटी जब बन्दाबन्दीको घोषणा भयो। सबैभन्दा पहिले मेरो ध्यान खल्तीमा गयो। खल्तीमा एउटा पुरानो फोन सेटमात्र थियो। फोन सेटमा बैंकको मेसेज अलर्ट हेरेँ। त्यसमा लेखिएबमोजिम अब खल्तीमा पैसा आउनेवाला थिएन। खल्तीमा पैसा नआए भान्छामा कार्यक्रम बन्द हुनेवाला थियो। भान्छाको कार्यक्रम केही दिनसम्म हुने त पक्कापक्की नै थियो।...
संजोग कोइराला चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन्, नायक हुन् अनि व्यवसायी पनि हुन्। अहिले चियाअड्डाको ब्रान्डबाट संजोगको परिचय चुलिँदो छ। ६ वर्षदेखि पूर्णतः व्यवसायमा लागेका संजोग विगत ३ वर्षदेखि भने जिन्दगीको ९० प्रतिशत समय फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा दिइरहेका छन्। लकडाउनका बेला उनी यसलाई कसरी जीवन्त राख्ने, कसरी फैलाउने र जोगाउने भन्ने...
मनोजकुमार भट्टराई–प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। उनको जन्म र हुर्काइ काठमाण्डौमै भयो। उनकै शब्दमा मनोजको बाल्यकाल हरेक दृष्टिले उत्कृष्ट रह्यो। हजुरआमाको प्रेम र प्रत्यक्ष संलग्नताले उनको बाल्यकाल पूर्ण महत्वमा बित्यो। हजुरआमाबाट प्रेम गर्न सिकेका हुन्, मनोजले। शिक्षादीक्षामा हजुरआमा, मीठो खाने राम्रो...
श्याम बजगाईं, युवा उद्यमी हुने लाइनमा संघर्ष गरिरहेका छन्। उद्यमी हुन धेरै कुरा हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता छ उनको। स्टार्टअप व्यवसायमा लागिपरेका उनी आत्मनिर्भर बन्ने कुराका पक्षपाती हुन्। ‘म स्टार्टअप आन्ट्रपिनर हुँ’, उनी भन्छन्, ‘म आइकन भइसकेको छैन। सेलिब्रिटी पनि होइन। भोलि हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ छ।’ आफ्नो काममा...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका वर्तमान सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ पेसाले बैंकर हुन्। तर, उनमा कविताप्रेम जीवन्त छ। उनका हरेक पाइला कवितामय छन्। स्कुल पढ्दाताका सुरु भएको कविता लेखन र पठनको यात्रा आज पनि जारी छ। उनको कवितायात्रा सुरु भयो, संखुवासभा चैनपुरमा पढ्दै गरेको स्कुल, सरस्वती माविबाट। ‘आमा’ शीर्षकको कविताबाट पुरस्कृत पनि भएका...
लकडाउनले जुराएको अवसर: सुरु भो ‘सचित्र किताब’
भानु भट्टराई पेशाले कलाकार हुन् । उनी अहिले सचित्र किताबको व्यवसायबाट व्यवसायीको परिचय बनाउन लागिपरेका छन् । विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्दै विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा काम गरेको करीब १० वर्षको अनुभवपछि भानुले आफूलाई व्यवसायी बनाउन लागेका हुन् । उनीसहित ५ जनाको टिमले किताबको काम सुरु गरेका छन् । सचित्र किताब ३ देखि १० वर्षसम्मका...
बैंक कसका लागि हो ?
-नरेन्द्रकुमार नगरकोटी आज म मेरो ऋण खण्डमा कन्फेस गर्छु । कतिपयले पत्याउनुहुन्न मेरो ऋण छ भन्ने कुरा । कतिपय भने आत्तिनुहुन्छ मेरो ऋणको रकम सुनेर । आज म ऋण कहानीका खण्डहरु सुनाउँछु । बैंकमा कसको पैसा हुन्छ ? सहकारी, वित्तीय संस्था या फाइनान्समा कसको पैसा हुन्छ ? आफ्नै त होइन । डिपोजिट गर्नेहरुको पैसा हुने हो । अनि, व्यवसाय गर्नेहरुले कतै न...
पिएचडीको ब्रेकमा जागिर खान खोज्दा ख्याल–ख्यालमै बैंकर बनेकी रश्मी
रश्मी पन्त बैंकरको रुपमा कार्यरत भएको ५ वर्ष बढी भयो । उनले जीवनमा योजनामा नराखे पनि बैंकको जागिरले उनलाई पछ्यायो । प्रभु बैंकमा चिफ अपरेटिङ अफिसरको रुपमा उनको बढुवा भएको एक महिना हुँदैछ । उनको जीवनमा सरप्राइज चलिरहन्छ । उनलाई प्रभु बैंकमा आफूले अप्लाइ गरेकोभन्दा माथिल्लो पदका लागि बैंककै तर्फबाट अफर आयो । अझ इन्टरभ्यू दिएको २ दिनमा नै...